ဘယ်အချိန်မှာ PSAT ရမှတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူပါသလား?
ကျောင်းသားများ & မိဘများအဘို့ မဟာဗျူဟာ & လေ့လာ
by ကယ်လီ Roell
သငျသညျအောက်တိုဘာလအတွက် PSAT ယူလျှင်သင်သည်လယ်ပိုင်းဒီဇင်ဘာလအတွင်းကောလိပ်ဘုတ်အဖွဲ့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏ရမှတ်များရရှိရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အတိအကျရက်စွဲကိုသင်အထက်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ရန်အတွက်ပြည်နယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားရမှတ်လွှတ်ပေးရန်အသေးစိတ်အချိန်ဇယားကိုတွေ့ရမယ်။
အဆိုပါ PSAT စမ်းသပ်ခြင်းကို (ဒီမှာတွေ့မြင်အောက်တိုဘာလတွင်ရာအရပ်ကိုကြာပေမယ့် တိကျတဲ့ PSAT စမ်းသပ်ရက်စွဲများ လက်ရှိတစ်နှစ်), PSAT ရမှတ်များနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဒီဇင်ဘာလသည်အထိဖြန့်ချိကြသည်မဟုတ်။
2017 ၏အောက်တိုဘာလအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆိုယူသောသူသည်ကျောင်းသားများကိုအဘို့, PSAT ရမှတ်အောက်ပါရက်စွဲများအပေါ်ဖြန့်ချိပါမည်:
2017 PSAT / NMSQT ရမှတ်ဖြန့်ချိနေ့စွဲများ
ဒီဇင်ဘာလ 11, 2017 alaska ကယ်လီဖိုးနီးယား, ကော်လိုရာဒို, ဟာဝိုင်ယီ, အိုင်ဒါဟို, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်, Indiana ပြည်နယ်, အိုင်အိုဝါ, Kansas ပြည်နယ်ကမစ်ရှီဂန်, မင်နီဆိုတာ, မစ်ဆူရီ, Montana, Nebraska, Nevada မြောက်ဒါကိုတာ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, အော်ရီဂွန်, တောင်ဒါကိုတာ, Utah ဝါရှင်တန်အနောက်ဗာဂျီးနီးယား, Wisconsin ပြည်နယ်, Wyoming
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2017 အရီဇိုးနား, Arkansas ပြည်နယ်, ဝဲ, မေရီလန်းပြည်နယ်, နယူးဂျာစီပြည်နယ်, နယူးမက္ကစီကို, နယူးယောက်, ဥက္ကလာဟိုးမား, Pennsylvania ပြည်နယ်, တက္ကဆက်
ဒီဇင်ဘာလ 13, 2017 Alabama အဘိဓါန်, Connecticut, ဖလော်ရီဒါ, ဂျော်ဂျီယာ, ကီ, Louisiana, မိန်း, မက်ဆာချူးဆက်, မစ္စစ္စပီ, New Hampshire, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား, Rhode Island, တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနား, Tennessee ပြည်နယ်, ဗားမောင့်ဗာဂျီးနီးယား
PSAT ရမှတ်ကျောင်းများအစားကျောင်းသားမှပို့ခံရတိုက်ရိုက်သွားပါလေ့ရှိတယ်။ အခုတော့သငျသညျသငျ့ကြောငျးတိုင်ပင်ခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ access ကိုကုဒ်တွေနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့်ရမှတ်အစီရင်ခံစာများကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ hone ဖို့ဘယ်လိုသိကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်က, သင့်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည်နှင့်အတူယင်း Khan Academy မှတဆင့်အခမဲ့, ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုကိုလက်ခံရရှိ do.You'll လျှင်သင်ရဆုကြေးငွေပစ္စည်းများအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်အွန်လိုင်းကသူတို့ကိုဝင်ရောက်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအရာပါပဲ အဆိုပါ SAT များအတွက်အကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်မှု။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျအကောင်းဆုံးကိုသင် fit ဟန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်အကိုင်များနှင့်ဗိုလ်ကြီးအကြံပြုကြောင်းကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်တစ်ခုအတွက်စားသုံးရလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းပဲသင်၏အွန်လိုင်းရမှတ်ကိုရယူသုံးခြင်းဖြင့် BigFuture နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဗိုလ်ကြီးများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
သင်အမှန်တကယ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး, သို့မဟုတ်သင့်ရမှတ်တက်ရှာနေနှင့်အတူနှောငျ့ယှကျချင်ကြဘူးလျှင်, သင်သည်သင်၏ PSAT ရမှတ်ကိုသင်စမ်းသပ်ယူသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသောသင်၏ကျောင်းမှပို့ကြသောအခါနှောင်းပိုင်းတွင်ဇန်နဝါရီလသည်အထိစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုအရပ်မှ, သင်၏ဆရာသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မှုတိုင်ပင်မှူးမတ်ကိုသင်စက္ကူရမှတ်အစီရင်ခံစာဖြန့်ဝေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ PSAT ရမှတ်အစီရင်ခံစာ
သငျသညျ (ကဒီမှာဖွင့်သင့်ရဲ့ PSAT ရမှတ်အစီရင်ခံစာလက်ခံရရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့ နမူနာ သင်ကြည့်ရှုပုံကိုသိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်), သငျသညျတဆယ်ကွဲပြားခြားနားရမှတ်ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ မူလတန်းစိုးရိမ်ပူပန်ဤနေသောခေါင်းစဉ်:
သင့်ရဲ့စုစုပေါင်းရမှတ်: (320 နှင့် 1520 ကြား)
သင့်ရဲ့အထောက်အထား-အခြေပြုစာဖတ်ခြင်းနှင့် Writing ရမှတ်: (160 ကြား 760)
သင့်ရဲ့သင်္ချာရမှတ်: (160 ကြား 760)
သင့်ရဲ့ NMSC ရွေးချယ်ရေးညွှန်းကိန်း (SI) ရမှတ်: သင့်စာဖတ်ခြင်း, ရေးသားခြင်းနှင့်ဘာသာစကားများနှင့်သင်္ချာရမှတ်တက်ကဆက်ပြောသည်နှင့်2တို့က multipled ။
အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ PSAT ရမှတ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့
အခုဆိုရင်သင့်ရမှတ်များရရှိထားကြောင်း, သငျသညျအဘယျသို့လုပျသငျ့သလဲ သင့်ရဲ့ PSAT ရမှတ်သင် SAT အပေါ်အခွအေစခွေငျးငှါသင်မည်သို့ပြသနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်ကတည်းကလုပ်ပြီးသင် SAT အပေါ်ဝင်ငွေရစေခြင်းငှါအဘယျသို့တစ်ခုအရိပ်အယောင်အဖြစ်အဖြေရှာတဲ့စမ်းသပ်နှင့်သင့် PSAT ရမှတ်အစီရင်ခံစာအဖြစ် PSAT သုံးစွဲဖို့အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခြုံငုံရမှတ်များထွက်စစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့ percentile သငျသညျမြားတကျရောကျစိတ်ဝင်စားနေသည့်ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များအဘို့အဝင်ပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေ၏ရမှတ်များနှင့်အညီဖြစ်ပါသလား
လွန်း, သင့်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ပေးသေးငယ် Sub-ရမှတ်အာရုံစိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်္ချာ၌သင်တို့၏ခြုံငုံရမှတ်ဖြစ်ပါသည်, အကယ်. တော်တော်လေးကောင်းသော , ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့နိမ့်ဆုံးရမှတ်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်ဒေတာများအားသုံးသပ်ခြင်း၌ရှိ၏, သင့်စာရွက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သော subscores တဦး, ထို့နောက်သင်တို့အဘို့ ပို. ပင်မေးခွန်းတွေသူတို့အားအမျိုးအစားများကိုလေ့လာမှသိကြပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ SAT ။ သင့်ရဲ့ PSAT ရမှတ်အစီရင်ခံစာသင်သည်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်လျှင် SAT စာမေးပွဲဖြေပေါ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးရမှတ်ရန်သင့်ကိုလမ်းပြကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏ PSAT စမ်းသပ်ဖို့ဆက်စပ်ဘာမှ ပတ်သက်. မေးခွန်းများရှိပါက, ကျောင်းမှာသင့်ရဲ့အကြံပေးနှင့်အတူရက်ချိန်းအခမဲ့ခံစားရသည်။ သူသို့မဟုတ်သူမကိုသင်စမ်းသပ်နှင့်သင့်ရလဒ်များကို၏ ins နှင့်တနေရာသွားလာကူညီကျွမ်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်တန်း 10 ဦးပါ GRE စမ်းသပ်ခြင်းသိကောင်းစရာများ
ပင်မ Idea အဖြေများရှာဖွေခြင်း 2
အဆိုပါစမ်းသပ်မှု ACE မှထိပ်တန်း 15 ACT သိကောင်းစရာများ
ပင်မ Idea Find လုပ်နည်း
ဝေါဟာရ Flash ကိုကဒ်များ Make လုပ်နည်း
တစ်ဦးစမ်းသပ်, ပဟေဠိ, ဒါမှမဟုတ်စာမေးပွဲများအတွက်လေ့လာဖို့ကိုဘယ်လို
နားလညျမှုသင်ထောက်ကူစာရွက် 1 အဖြေများ Reading
သင်ထောက်ကူ 2: စာရေးဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်
Agnivarsha: 'အဆိုပါမီးသတ် & မိုး' '
အဆိုပါနှလုံး Cycle ၏ Diastole နှင့်နှလုံးကျုံ့အဆင့်
အစ္စလာမ့်အဝတ်အစားတစ်ခုတရားဝင် ID ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံအတွက်ဝတ်ဆင်ခံရနိုင်သလား?
အီလီနွိုက်စ Wesleyan တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
သင်ကလက်ဝါးကပ်တိုင်စေချင်ပါလိမ့်မယ်6Bridges
အွန်လိုင်းအခမဲ့ထိတ်လန့, Movies Watch မှ 16 အကောင်းဆုံး (ဥပဒေရေးရာ) Website များ
မာရိသညျ Baker Eddy Quotes
5 Hilary Marilyn Monroe ဟာသများရယ်မော Make အာမခံ
Apocopation နှင့်စပိန်စကားများ၏ clip
အဲဒီ 17 ခြောကျခြားဖွစျပွီး Funny မြို့ပြ Legends ပြုံးရယ်ဖို့မကြိုးစားပါ!
Timeline ကို: တက်ရောက်မှတဆင့်ဥပဒေကျောင်း့ Prep
အဆိုပါ Broken Window ကိုမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်
Kabetogama ရေကန်ပေါ် Walleye ဖမ်းရန်ငါးမျှားတူးစင်အသုံးပြုခြင်း
ထိပ်တန်းကျန်းမာရေး Homework မှအလေ့အထများ
ဆန်းစစ်ခြင်း: က Superman: အ Supermen #2(2016) ၏လာ
ကနျြးမာရေးကိုရည်မှတ် 10 အရေးအသားအကြံပြုချက်များ
ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
စားပွဲတင်တင်းနစ် / Ping-Pong အခြေခံပညာပှေ့ - FH Tomahawk Topspin / Sidespin အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်
(Brush မှ) 'Brosser' 'Conjugate လုပ်နည်း